Who were Bengali, so called Rohingya?: ရခိုင်အပါအဝင်မြန်မာအားလုံးကို ငတုံး၊ငအ တွေလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ VOA မြန်မာသတင်းဌာနမှူး ဦးသန်းလွင်ထွန်း ကိုဒီလိုတိုင်ကြားရအောင်
ရခိုင်အပါအဝင်မြန်မာအားလုံးကို ငတုံး၊ငအ တွေလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ VOA မြန်မာသတင်းဌာနမှူး ဦးသန်းလွင်ထွန်း ကိုဒီလိုတိုင်ကြားရအောင်
To, Broadcasting Board of Governors
Attn: Mrs Hillary Rodham Clinton and Mr. Michael Lynton
ဧပြီ လ ၃၀ ရက် ၂၀၁၂
အကြောင်းအရာ။ ။ သတင်း ဘက် မ လိုက် မှု ကျင်. ဝတ် ကို ဖေါက် ဖျက် သည်. VOA
မြန် မာ ပိုင်း အယ် ဒီ တာ ချုပ် အား တိုင် ကြား ခြင်း
လူ ကြီး မင်း များ ရှင့်
ကျမသည် မြန်မာပြည်တွင် နေထိုင်သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာသတင်းများးကို ပြည်ပမှ မြန်မာဘာသာဖြင့်ထုတ်လွှင့်သည့် သတင်းဌာနများဖြစ်သော BBC, VOA, RFA, DVB စသည့် သတင်းဌာနများမှ ထုတ်လွင့်သည့် သတင်းများကို နေ့စဉ်နားထောင်နေသူတစ်ဦးလဲ ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါတွင် အင်တာနက် တွင်သာမက မြန်မာပြည်ဂျာနယ်များတွင်ပါ လူတိုင်းစိတ်ဝင်တစားဖတ်ရှူနေကြသည့် သတင်းမှာ VOA မြန် မာ ဌာန မှုး ဦးသန်းလွင် ထွန်း က ရို ဟင် ဂျာ တွေ ကို ဇောင်းပေး ပြီး မမှန်ကန် သော ဝါဒဖြန် ချီေ၇း လုပ်ထား သော ၂၀၊ဧပြီ၊ ၂၀၁၂ တွင်ဖော်ပြထားသော အမေရိကန်အခြေစိုက် ရိုဟင်ဂျာအသင်းရဲ့  ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူ Dr. Wakar Uddin နှင့်interview အပေါါ် မကျေနပ် ဖြစ် နေ ကြသော ပြည် သူ လူ ထု ၏ သဘောထား များ ဖြစ် ပါ သည်။ Ref : http://www.voanews.com/burmese/news/democracy-forum/burma_democracy_04-22-2012-148341035.html
မြန် မာပြည် ၇ခိုင် ပြည် နယ် တွင် လူဝင် မှု ကြီးကြပ်ေ၇း နှင်. ညှိ နေ သော ဘင်္ဂလား ဒေ.၇ှ် ဖွား ရိုဟင် ဂျာ တို..သည် စာနယ် ဇင်း ကျင်. ဝတ် ကို ချိုး ဖေါက် ပြီး မြန်မာပိုင်း VOA သတင်း ဌာ န မှုး ဦး သန်းလွင် ထွန်း နှင်. ပူးပေါင်း ကာ သူတို. မြန်မာ နိင် ငံ တွင် ကြုံနေ ရ သည်. လူ ဝင် မှု ပြသနာ ကို လူ.အခွင်. အေ၇းပြသနာဖြစ် အောင် ကြိုးစား နေ ခြင်း ကို မြန် မာ ပြည် ရှိ ဘယ်သူ ကမှ လက် ခံ မည် မဟုတ် ပါ။ VOA ၏ရုပ်မြင် သံကြား အင်တာ ဗျူး သည် တဖက် သတ် ဝါဒဖြန်. ချီ မှုဖြစ်ပါ သည်။ ဤ ကိစ္စ နှင်. ပတ်သက်ပြီး VOA ဌာနမှုး သန်း လွင် ထွန်း က ဒေ သ ခံ ရ ခိုင် လူ မျိုး များ နှင့် သမိုင်း ပညာရှင် များ ကို ဘက် ၂ ဖက် ကို လုံးဝ မမေး မြန်း ပဲ ရို ဟင် ဂျာ ကို ကျမ တို. နိုင် ငံ ၏ လူမျိုး စု တ စု လို မေးမြန်း၍ ဝါဒ ဖြန်. ချီ ၊ ရိုဟင်ဂျာအေ၇း ကို သာ ကြေငြာ တင်လွှင့်သွားခဲ့သည်မှာ အလွန်မှ မြန်မာပြည် ပရိသတ်အတွက် ခံပြင်း စရာ၊ စိတ်မကောင်း စရာ ဖြစ် ပါ သည်။
သို.သော်လည်း မြန်မာပြည်သူများ စိတ်ဝင်စား သိချင်နေသော အချက် မှာ မည် သည်.အကြောင်း ကြောင်. ဦးသန်း လွင် ထွန်း က ဤ ရိုဟင်ဂျာ သတင်းကို VOA မှ သတင်း မျှတမှု မရှိပဲ၊ ဘက်မလိုက်မှု အခြေခံ စံတွေ ကို လေးစား ခြင်း မရှိပဲ အဂတိ သုံးပြီး သတင်း မမှန် တာ သတင်း မစစ် တာ ကို ကြံဖန် ထုတ်လွှင့်ခြင်းကို ယနေ.အချိန်အထိ ဘယ်သူမှနား မလည် နိုင် ကြပါ။ ။ ထိုသတင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး သောတရှင်များမှ မြန်မာပိုင်းဆိုင်ရာဌာနမှူး ဦးသန်းလွင်ထွန်းအား သတင်း ရွေးချယ် မှု ပေါ်လစီ၊ ဦးစားပေး သတင်း ကြေငြာမှုဆိုင်ရာ လမ်း ညွှန် မှု တွေကို တရား ဝင် ထုတ်ပေး ၇န် မကြာခဏ တောင်းဆိုသူများ ရှိပါသည်။ သို.သော် မြန်မာပိုင်းဆိုင်ရာ ဌာနမှူး ဦးသန်းလွင်ထွန်းသည် VOA ၏ Charter စံနှန်း များ ဖြစ် သည်. သတင်းမှန် ကန် မှု၊ သတင်း ဇစ် မြစ် အနည်း ဆုံး ၂ ခု မှ သတင်း ယူသေခြာစေမှု၊ ဘက်မလိုက်မှု၊ ဘက်ပေါင်း စုံ အသံပေါင်း စုံ မှသတင်းအကြုံး ဝင် မှု စသည် စံ တို. ကို တမင် ပစ် ပယ် ၊မလေးမစားလုပ် ကာ၊ မြန်မာ ပြည် ရှိ ပရိတ်သတ်ကြီးကို သမိုင်း လိမ် ရိုဟင် ဂျာ အင်တာဗျူး များ ဖြင်. စော် ကား ခဲ.ပါ သည်။ တာဝန်ရှိသူ သန်း လွင် ထွန်း သည် မည် သည်. ဆန္ဒဖြင့်. ဤအစီအစဉ်များကို တင်လွှင့်နေသည် ကို ကျမ တို. သိလိုပါ သည်။ ထင်ရှားနေပါသည်။ တတိုင်း ပြည် လုံး က လုံး ဝ လက် မခံ နိုင် သော ၊ မမှန် ကန် သော ရိုဟင် ဂျာ ဝါဒဖြန်. ချီေ၇း များ ကြောင့်VOA မြန်မာပိုင်း အစီအစဉ် က တာဝန် ရှိသူများ က VOA ၏ ဂုဏ် သိက္ခာ image ကျ ဆင်း အောင် လုပ် နေ သလို ဖြစ် နေ လျက် ရှိပါ သည်။
ကျမသည် မြန်မာပြည်တွင် ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် တက်တက်ကြွကြွပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ကျမရောက်လေရာ မြို. ရွာ တိုင်း ၏ စကားဝိုင်းများတွင် သတင်းဌာနများ၏ အထူးသဖြင့် VOA ၏ သတင်းဖြန်.ဝေမှု တာဝန်ပျက်ကွက်မှုများကို ပြောကြားနေကြသည်ကို တွေ.မြင်ကြားသိနေရပါသည်၊ ထို.ကြောင့် VOA ၏ပရိသတ်တစ်ဦးအနေဖြင့် အကြံပြုလိုသည်မှာ သတင်းဌာန၏ ပေါ်လစီ မူဝါဒများနှင့်အညီ သတင်းထုတ်လွှင့်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသည့် မြန်မာပိုင်းဆိုင်ရာဌာနမှူး ဦးသန်းလွင်ထွန်းအား သင့်တော်သလို အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးပါရန် တိုင်ကြားအပ်ပါသည်။
Your phone or email or
Your address တွေထည့်ပေးလိုက်ရင် ရပါပြီ။
အမ အေးအေးစိုးဝင်း ကဒီ sample letter ကိုကူညီတာပါ။
Credit to Aye Aye Soe Win။
Attention to : Hillary Rodham Clinton or Michael Lynton
Yangon Myanmar သို့ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ စာရော email ပါပေးပို့ကြပါ၊
ကျွန်တော်တို့ VOA မြန်မာသတင်းဌာနမှူး ဦးသန်းလွင်ထွန်း ကအောက်ပါ The VOA Charter ကိုဖောက်ဖျက်၍တိုင်တန်းတာပါ။
အချက် ၁ ကို သန်းလွင် ထွန်း မျက် နှာဗြောင် တိုက် ပြီး ချိုးဖေါက် ပါ တယ်။
သတင်း ကြေငြာ ချက် တ ခု ဟာ တိကျ မှန် ကန် ဖို. Accuracy.. ဘက် လိုက်မှု ကင်း ဖို. Objectivity...အသံပေါင်း စုံ ဘက် ပေါင်း စုံ ကို ဖြန်ကျက် အကျုံး ဝင်စေဖို. Comprehensiveness ရှိရပါ မယ်။ ဒီ ရိုဟင် ဂျာ အင် တာ ဗျူး ကို တင် ဆက် သွား တဲ. သန်. လွင် ထွန်း သူ ဘာ လုပ် ထား သလဲ သူ သိ ပါတယ်။ ဒါ ဟာသမိုင်း လိမ် အချက် အလက် တွေလိမ် ထား တဲ. သွေးရိုး သားရိုး aired program မဟုတ် ပါ။ ဒီ အတွက် အမှန် တရား ကို မြတ် နိုး ပြီး မြန်မာပြည် သမိုင်း အမှန် ကို အမှန် အတိုင်း မပျက် စီးစေချင် တဲ. သူအား လုံး ဝိုင်း ဝန်း ဖေါ် ထုတ် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။ ဒီတခု တင် မက၊သူ ဟာ သူ ဌာနမှုးဖြစ်နေ တဲ. VOA မြန် မာ ပိုင်း မှာ သူ. လုပ် ပိုင် ခွင်. ထက် ကျော် ပြီး သောတ ရှင် ပရိတ် သတ် တွေ ကို မမှန် ကန် တဲ. ဝါဒ ဖြန် ချီေ၇း ကို တမင် လုပ် ပြီး စော် ကား တာတွေ၊ သတင်း ဌာန အလွဲသုံးစား ပြုတာ တွေ ရှိ ခဲ.ပါတယ်။ စပြီး သတင်း ယူ က ထဲ က VOA အယ် ဒီတာ အဖွဲ.အနေ နဲ. ( မူ အ ရ တကယ် အလုပ် လုပ် မယ် ဆို ရင်) ကြေငြာ မဲ. သတင်း တပုဒ် ရဲ. ဇစ် မြစ် source of news ကို နေ ရာ ၂ နေ ရာ က အနည်း ဆုံး သေချာ စေ ပြီး မှ သတင်း ယူ ရပါ တယ်။ ဒါ မှ မဟုတ် ရင် ပေး ချင် ပြောချင် တဲ.သူ တယောက် က ဒါပြောလိုက်..ဒါေ၇းလိုက် ..ဆို ပြီး မိမိ ကြေငြာ ချင် တာ ရှိ ရင် တခုခု ကို လက် လွတ်စပယ် လှမ်း ခိုင်း လိုက် ရုံပေါ.။ ဒီ လို လုပ် လို. မရပါ ဘူး။ သေချာခိုင် မာသော reliable news ဖြစ် စေ ဖို. နေ ရာ ၂ နေ ရာ two independent sources က သတင်း ကို စု ပြီး မှ သတင်း လုပ် လို. ရတာပါ။. သန်. လွင် ထွန်း ဟာ ဒေသခံ ရခိုင် အမျိုးသား တွေ..ရခိုင် အဖွဲ.အစည်း တွေ..ပြီးတော. ဆိုင် ရာ လူ ဝင် မှု ကြီး ကြပ် ရေး က ဒေသဆိုင် ရာ ကန်. သတ် ချက် တွေ ..ပြီးတော. ဒီကိစ္စ ကို မမှန် တဲ. အ တွက် ကန်. ကွက် နေ ကြတဲ. မြန် မာ နိုင် ငံ သား တွေ ဘယ် သူ တွေ ကို များ သူ. အင်တာဗျူးမှာ. ၂ ဘက် balanced မျှတမှုရှိအောင် ထည်. စဉ်း စား ခဲ.တာ မဟုတ် ပါ ဘူး။ ရိုဟင် ဂျာ ဖက် က မမှန် ကန် တဲ.
ဇတ် လမ်း ပြောနေ သူ ကို သာ တ ဖက် သတ် ဇောင်း ပေး interview သွား ပါ တယ်။. သတင်းသမား ဘက် မလိုက် ရေး ဆို တဲ. အလွန် အရေးကြီး တဲ.စံနှန်း ကို လဲ ဒီ လို ချိုးဖေါက် လိုက် ပြန် ပါ တယ်။ ဒီတော. အမေရိကန် နိင် ငံ မှာ ပင်ပင် ပန်းပန်း အလုပ် လုပ် ပြီး ပေး ထား ရ တဲ. Income taxတွေ နဲ. ပြည်သူ. ပေးတဲ. လစာ ကို ယူ ..သူ.အလုပ် သူမလုပ် ပဲ..သူ.အထက်က VOA အဖွဲ.ကြီး ရဲ. Charter ကို အလျား လိုက်..ဒေါင် လိုက် ငါ လုပ် ချင် တာ လုပ် လို. ဖေါက် ဖျက် လို. ရတယ် ဆို ပြီး ပြည်ပ က တာဝန် မဲ. media မြန်မာသတင်း သမားတွေကို တိုင်းပြည်ကို ချစ်..အမှန်တရား ကို ဘာနဲ.မှ အပေးအယူ မလုပ်မဲ. ..အမျိုးကောင်းသား အမျိူးကောင်းသမီး အား လုံး က ပြတ်ပြတ် သားသား ရင် ဆိုင် ဖို. လိုတဲ.အချိန် ရောက် နေ ပါ ပြီ ။ BBG ကို စာရေးကြ ပါ။. VOA ကို ဆန်. ကျင် ကြပါ။ ဒါ ကျမတို.ရဲ. ဘေး သင်. နေ တဲ. မြန် မာနိုင် ငံ ကို စော်ကားခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။ မမှန် ကန် တဲ.သူ တွေ သူတို. လုပ် ချင် ရာ လုပ် ခွင်. မ ရှိပါ ဘူး။ ဒါမျိူးတွေဖြစ် နေ တိုင်း ရပ် ကြည်.သူတွေ ကလည်း ပြု သူ တွေ လို ပဲ အပြစ် ရှိ ပါ တယ်။ ဒုတ်တွေ ဒါး တွေ မ ကိုင် ပဲ ..ယဉ်ကျေး လိမ္မာ အသိဥာဏ် သုံး ပြီး ဇွဲ ရှိ ရှိ နဲ. ဒီ ကိစ္စ ကို ဝိုင်း ဖြေ ရှင်း ကြ မယ်။
ကျေး ဇူး တင် ပါ တယ်။
အေးအေး စိုး ဝင်း
ဤစာကို ပို.သောသူတို.သည် မိမိတို.၏ လက်မှတ် နာမည် ဆက်သွယ်ရမည့် လိပ်စာ ဖုံးနံပါတ်နှင့် အီးမေးလ်( ရှိပါက) ထည့်သွင်းဖေါ်ပြ၍ ပို.ပေးရမည် ဖြစ်ပါသည်၊ မိမိကိုယ်မိမိ ယုံကြည်ပါ။
publicaffairs@bbg.org လိပ်မူရန်မှာ ဟီလာရီကလင်တန်နှင့်
Michael Lynton ဖြစ် ပါ သည်။ သူတိုး ၂ ဦး စလုံး BBG ရဲ. Board membersဖြစ် ပါ တယ်။
Posted by Anti Rohingya (Bengali Muslim) - Anti Terrorist at 4:48 PM
Labels: ထုတ်ပြန်ချက်, သတင်း, ပေးစာ, ကြေငြာချက်